Apple inotangisa zviri pamutemo watchOS 4.3.1 uye tvOS 11.4 | Ndinobva mac
Apple inosunungura zviri pamutemo watchOS 4.3.1 uye tvOS 11.4
Tatova pano shanduro dzekupedzisira dze watchOS 4.3.1 uye tvOS 11.4 yevashandisi vese. Mune ino kesi, ese maBhaibheri anouya kubva muruoko rweIOS 11.4 irwowo irwo rwekupedzisira kurodha pasi. Pasina mubvunzo runyerekupe rwekuburitswa kweyekupedzisira vhezheni yeIOS kwakakonzera kuvhurwa kweshanduro dzeWOSOS neTVOS panguva imwe chete.
Masikati ano tanga tichipotsa vhezheni yekupedzisira ye macOS inogona kusvika mumaawa mashoma anotevera, asi parizvino tine shanduro dzekupedzisira dzeOS idzi dzemunhu wese. Muzviitiko zvese izvi kunatsurudzwa kunotarisa kugadziriswa kwezviputi, kugadzirisa kugadzikana uye kana iri Apple TV inoita kuti ienderane neAirPlay2.
Rangarira kuti zvese zvishandiso zvinofanirwa kuvandudzwa nekukurumidza sezvazvinogona kuti ubatsirwe nekuvandudzwa kwesystem uye zvigadziriso zvebug zvakaitwa. Semazuva ese mune izvi zviitiko zvakakosha kuti urambe uchivandudzwa kuti ubatsirwe nenhau uye mune iyo Apple Watch yatinoda gadziridza iPhone kune iOS 11.4 kutanga kukwanisa kumutsiridza wachi kubva ku Clock app pane iyo smartphone.
Ticharamba tichiteerera kuvandudzwa kwakaitwa mushanduro idzi nyowani uye pamusoro pedzose kuteerera kusvikira vatanga yekupedzisira vhezheni yeMacOS Yakakwira Sierra 10.13.5. Kana isu tikawana chero kuvandudzwa kunogona kuratidzwa mune idzi nyowani shanduro dzeWOSOS kana tvOS tichavagovana nemi mose mune ino nyaya imwechete kana zvichidikanwa tichagadzira imwe nyowani, asi zvinoita sekunge kune mashoma ekuvandudza kunze kwekuitwa yeAirPlay 2 paApple TV uye nekugadziriswa kwesimba.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Apple zvigadzirwa » Apple TV » Apple inosunungura zviri pamutemo watchOS 4.3.1 uye tvOS 11.4
Yangu TouchBar-Yangu mirawo, nzira nyowani yekugadzirisa iyo bara paMacBook Pro
Dodocool DA121 charger base yeApple Watch